तमिलमा शुभ प्रभात – Vocre
Tamil is spoken primarily in India and Sri Lanka. Find out how to say good morning in Tamil and learn about this Dravidian language — especially if you want to translate Tamil greetings for business, स्कूल, वा यात्रा.
तमिल भाषा बोलिन्छ 77 संसारमा लाखौं मानिसहरू, सहित 68 पहिलो भाषाको रूपमा बोल्ने लाखौं मानिसहरू र9दोस्रो भाषाको रूपमा बोल्ने लाखौं मानिसहरू.
अमेरिकामा।, 250,000 मानिसहरू यो भाषा बोल्छन्. क्यालिफोर्नियामा तमिल भाषीहरूको जेबहरू छन्, टेक्सास, र न्यू जर्सी.
तमिलमा शुभ प्रभात कसरी भन्न सकिन्छ
विश्वभरि, मानिसहरूले शुभ प्रभात भन्छन् जब तिनीहरू बिहानको पहिलो कुरा कसैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छन् (र कहिलेकाहीँ यो साँझ अघि कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ!), नमस्ते भन्न, वा एक यात्रीलाई स्वीकार गर्न.
तमिलमा शुभ प्रभात भन्न, तपाईले भन्नु हुन्छ, "कालाई वन्क्कम!"
को अंग्रेजी-देखि-तमिल अनुवाद कालाई बिहान छ, र vaṇakkam को अर्थ अभिवादन हो; त्यसैले, कालाई वानक्कमको शाब्दिक अनुवाद बिहानको अभिवादन हो!
यदि तपाइँ यो वाक्यांश लेख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले यसरी गर्नुहुनेछ: காலை வணக்கம்.
तपाईले vaṇakkam लाई अभिवादनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ — कालाईलाई वाक्यमा नल्याइकन पनि! भारतमा, मानिसहरू वास्तवमा शुभ प्रभात भन्दैनन्; उनीहरु मात्र भन्छन्, “Greetings.”
कालाई वानक्कम उच्चारण
kālai vaṇakkam उच्चारण कसरी गर्ने सिक्न चाहनुहुन्छ? मात्र भन्नुहोस्, "काह-ली vah-nआह-kum.”
यदि तपाइँ कसैलाई यो अभिवादन बोल्न सुन्न चाहनुहुन्छ भने, you might want to downloadalanguage translation app that offers speech-to-text translation.
तमिल भाषा: एक ईतिहास
तमिल भाषा द्रविड भाषाको परिवारबाट आएको हो (70 languages spoken mostly in Southeast Indian and Sri Lanka)
तपाईंले तमिलनाडुमा तमिल भाषीहरूको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भेट्टाउनुहुनेछ, श्रीलंका, र सिंगापुर. यो तमिलनाडु को आधिकारिक भाषा हो, श्रीलंका, सिंगापुर, र पुडुचेरी (एक भारतीय संघ).
तमिल एक भारतीय शास्त्रीय भाषा र भारतीय संविधानको अनुसूचित भाषा हो र संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषाहरू मध्ये एक हो।!
आवश्यक छ उत्तम भाषा अनुवाद अनुप्रयोग को लागी शिक्षा अनुवाद, स्कूल, वा व्यवसाय अंग्रेजी वाक्यांश? हामी मेशिन अनुवाद सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं जुन तामिल अनुवाद उपकरण छ र सजिलैसँग भाषणमा पाठ अनुवाद गर्न सकिन्छ, जस्तै Vocre अनुप्रयोग, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी.